राजाको दलहरु सँग भद्र र गोप्य सहमती भएको रहस्य बाहिरियो,अब के होला पुर्ब राजाको कदम ? (भिडियो सहित) – चितवन मिडिया
राजाको दलहरु सँग भद्र र गोप्य सहमती भएको रहस्य बाहिरियो,अब के होला पुर्ब राजाको कदम ? (भिडियो सहित)
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल जस्तो अल्पविकशित राष्ट्रका लागि युवा नै सर्वेसर्वा भएको बताएका छन् । राजा शाहले ट्वीटर मार्फत जनमतको कदर गर्न नजान्ने शासक र ऊद्वारा स्थापित कुनै पनि राज्य प्रणाली प्रभावकारी नहुने भन्दै युवा नै सर्वेसर्वा भएको बताएका हुन् । राज्य र जनताको सम्बृद्धिलाई थाती राखी व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने शासक भए नागरिकले कहिले पनि उँभो लाग्ने अवस्था नआउने पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको तर्क रहेको छ ।
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले लेखेका छन्, राज्य र जनताको सम्बृद्धिलाई थाती राखी व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने शासक भए नागरिकले कहिले पनि उँभो लाग्ने अवस्था आउन सक्दैन।
जनमतको कदर गर्न नजान्ने शासक र ऊद्वारा स्थापित कुनै पनि राज्य प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन। हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका लागि युवा नै सर्वेसर्वा हुन् । राष्ट्रिय शिव सेना पार्टीका अध्यक्ष बिक्रम बहादुर बमले पुर्ब राजा अनि उनको बिचार बारे प्रस्ट पारेका छन हेरौ उनको बिचार भिडियोमा जनताको आबाज